Aruba ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဘေ့စ်ဘော Major Leaguer သည်“ Xander Way” ခရီးသွားလာခြင်းကိုမြှင့်တင်သည်။
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » အသင်းအဖွဲ့သတင်းများ » Aruba ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဘေ့စ်ဘော Major Leaguer သည်“ Xander Way” ခရီးသွားလာခြင်းကိုမြှင့်တင်သည်။
Aruba အထူးသတင်း • အသင်းအဖွဲ့သတင်းများ • Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • သတင်း • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • ခရီးသွား Destination Update ကို • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ
Aruba ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလာရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့သည်ကြယ်အားလုံးကြယ်ပွင့်နှင့်အူဘာဘန်၊ ကာရစ်ဘီယံကျွန်းအတွက်အမှတ်တံဆိပ်သံအမတ်အဖြစ် Bogaerts သည်အကြောင်းအရာစီးရီးကိုမြှင့်တင်ပေးလိမ့်မည် Aruba သို့သွားပါ “ Xander Way” ကျွန်းကိုတွေ့ကြုံခံစားရန် visitors ည့်သည်များကိုအားပေးခဲ့သည်။
Major League Happiness စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတစ်လျှောက်နှင့်ဗီဒီယိုများစွာမှတစ်ဆင့် Bogaerts သည်သူ၏“ Dushi Tera” (“ Sweet Land” အတွက် Papiamento) ကိုအားကစားပရိသတ်များနှင့်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကိုပြသသည်။ Xander နှင့်အတူရောင်စုံအနုပညာဇာတိမြို့ဖြစ်သော San Nicolas မှတစ်ဆင့်လာရောက်လည်ပတ်ကြပြီး၎င်းကို Sunrise City ဟုလည်းလူသိများသော visitors ည့်သည်များသည်လမ်းအနုပညာကိုစူးစမ်းလေ့လာပြီး Aruban ယဉ်ကျေးမှု၏အဓိပ္ပာယ်ကိုရရှိနိုင်သည်။
Bubaerts မှ“ Aruba သည်ကျွန်ုပ်မွေးရပ်မြေနှင့်အိမ်ထက်ပိုမိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အနားယူခြင်း၊ မိသားစုနှင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်လှပသောရေကိုခံစားနိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ "Aruba Tourism Authority နဲ့ Boston မှာရှိတဲ့ငါ့ပရိသတ်တွေပြသတဲ့အနုပညာသမားတွေကိုပြသဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ "
စီးရီးတွင် Xander ၏အနှစ်သက်ဆုံးနေရာများအားကမ်းခြေချစ်သူများအတွက် Eagle Beach အပါအ ၀ င်ခရီးသည်အားလုံးအားဆွဲဆောင်နိုင်သည့် Aruba အနီးပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပြသသည်။ မကြာသေးမီကကမ်းခြေများအတွက်ကမ်းခြေများအတွက် ၂၀၁၁ TripAdvisor Travelers 'Choice ®ဆုများတွင်တတိယအဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ စိတ်အားထက်သန်သောစူးစမ်းရှာဖွေသူများကို Xander ၏ကျွန်းစု၏တောင်ဘက်စွန်းသည် Seroe Colorado သို့သွားရာ Aruba ၏ကြမ်းတမ်းသောကမ်းရိုးတန်းကိုကြည့်ရှု။ ကြည့်ရှုရန်လှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မည်။ Xander သည် Baby Beach၊ လဝက်ဝက်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်လှပသောအရောင်အသွေးစုံလင်သည့်လှပသောစိမ်းရောင်ရေနေသတ္တဝါနှင့်ကျွန်းတစ်လွှားရှိမတူကွဲပြားသောအချက်အချာကျသောပူဇော်သက္ကာများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့် Aruba ၏အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်အချို့ကိုလည်းလည်ပတ်သည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိသားတစ်ယောက်နဲ့လူကြိုက်များတဲ့ဘေ့စ်ဘောကစားသမားရှိနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ၀ မ်းသာရပါတယ်။ Aruba ၏လှပသောရေများ၊ ယူနိုက်တက်ကမ်းခြေများနှင့်သဲကန္တာရကဲ့သို့သောမြေအနေအထားသည် Arubans အားလုံး၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်အထူးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Boston နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Xander ပရိတ်သတ်များအားကျွန်ုပ်တို့၏ One Island ကျွန်းအားတွေ့ကြုံခံစားရန်ကြိုဆိုရန်ကျွန်ုပ်တို့မစောင့်နိုင်ပါ။ Asjoe-Croes, Aruba ခရီးသွားလုပ်ငန်းအာဏာပိုင်၏စီအီးအို
Xander's Happy Island သို့သွားရန်အခွင့်အလမ်းများအတွက်ဘေ့စ်ဘောရာသီတစ်လျှောက်လုံး Instagram နှင့် @aruba @arubatourism နှင့် Twitter ရှိ @aruba ရူဘူနှင့်ပရိသတ်များမှပရိသတ်များသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကိုလိုက်နာနိုင်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ် Xander's Aruba ကိုကြည့်ပါ၊ aruba.com/xander.
တည်ငြိမ်သော စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးက ကာရစ်ဘီယံ ကာရစ်ဘီယံကျွန်း ရှေးခယျြခွငျး ကမ်းရိုးတန်း Colorado အကြောင်းအရာ အချက်အပြုတ် ယဉျကြေးမှု ကန္တာရ လင်းယုန်ငှက် စူးစမ်းလေ့လာ မိသားစု ပရိတ်သတ်တွေ အကြိုက်ဆုံး ငါးဖမ်း လိုက် မိတ်ဆွေများ သွား! တဝက် ပျြောရှငျမှု နှလုံးသားများ မီးမောင်းထိုးပြ နေအိမ် ပူသော မှုတ်သွင်းခံ Instagram ကို သတ္တိကောင်းတဲ့ ပူးပေါင်း မြေယာ ချစ်သူများ M မီဒီယာ လ ဟာယပူဇော်သက္ကာ မိတ်ဖက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း လူကြိုက်များ မြှင့်တင်ရန် မြှင့်တင် ထောက်ပံ့ သက်တောင့်သက်သာနေပါ စားသောက်ဆိုင် ရာသီ မြင် စီးရီး အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင် ပြသ ပြပွဲ လူမှုရေး လူမှုမီဒီယာ အထူး အားကစား အစက်အပြောက် ကြယ် လမ်း နေထွက် ချိုသော ကာရစ်ဘီယံ အဆိုပါကျွန်း အဖျား ခရီးစဉ် ခရီးသွားအာဏာပိုင် ခရီးသည် ခရီးစဉ် TripAdvisor twitter သုံးပြီး ဗီဒီယိုများ အမြင်များ လာရောက်လည်ပတ်သူ စောင့် ရေကို လမ်း ကြိုဆို အောင်မြင်
Tourism Seychelles သည် FITUR Spain တွင် အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို စတင်ခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ 18, 2022